अस्पतालमा बिरामी कुरुवा युवतीले रविलाई देखेपछि रुँ’दै भनिन्, रवी दाइ तपाई नभएको भए मैले आमा पनि भन्न पाउने थिएन.. हेर्नुहोस् ? (भिडियो सहित) – List Khabar
Home / समाचार / अस्पतालमा बिरामी कुरुवा युवतीले रविलाई देखेपछि रुँ’दै भनिन्, रवी दाइ तपाई नभएको भए मैले आमा पनि भन्न पाउने थिएन.. हेर्नुहोस् ? (भिडियो सहित)
अस्पतालमा बिरामी कुरुवा युवतीले रविलाई देखेपछि रुँ’दै भनिन्, रवी दाइ तपाई नभएको भए मैले आमा पनि भन्न पाउने थिएन.. हेर्नुहोस् ? (भिडियो सहित)
admin May 25, 2021 समाचार Leaveacomment 93 Views
अस्पतालमा बिरामी कुरुवा युवतीले रविलाई देखेपछि रुँदै भनिन्, रवी दाइ तपाई नभएको भए मैले आमा पनि भन्न पाउने थिएन.. हेर्नु-होस् ? (भिडियो सहित)
पत्र`कारीतामा चर्चित नाम हो रवि लामिछाने । तर रवीले आफु`लाई पत्रकार भन्दा पनि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता भन्न मन पराउँछन् । उनको टेलि`भिजन कार्यक्रम निकै चर्चित छ । कार्यक्रम चलाउने शैली र उनले साना ब्यक्ति`हरुको बारेमा उठाए`का आवा`जका कारण उनलाई धेरैले मन परा`उँछन् । अहिले उनको कार्य`क्रम केही समय`का लागि बन्द छ ।
टेलिभि`जन छोडेपछि नयाँ योजना बनाउँदै गरेका रवि अहिले सामाजिक काममा लागेका छन् । नयाँ कार्य`क्रम सुरु गर्न केही समय लाग्ने बता`एका उनी महा`मारीका कारण सर्व`साधारणले उप`चार नै नपाउने अवस्था आएपछि सामा`जिक काममा लागेका हुन् । उनी अहिले आफुले निर्माण गरेको अस्पता`लमा समेत पुगेका छन् ।
एकातिर अस्प`ताल बनाउँदै गरेका उनी अहिले विरामी`को सेवामा पनि प्रत्यक्ष लागे`का छन् । परिवारका धेरै सदस्य गुमाएका संक्रमितको परि`वारलाई सहयोग गर्न उनीहरु अस्पता`ल पुगेका छन् । रवि लामिछानेले दुई वर्ष अघि निकिता संग वि`वाह गरेका थिए । विवाहको वार्षीक उत्स|वमा उनीहरु विरामीको सेवा गर्न अस्प`ताल पुगेका हुन् ।
सहयोग लिएर रवि अस्पता`लमै पुगे`पछि संक्रमितहरु आफुले पाएको दुख सुनाएर रोएका थिए । उनले समस्या परेकाहरुलाई सहयोग माग्न पनि आग्रह गरे । परेको सम|स्या संगै उपाय खोजौंला, चिन्ता नग`र्नु हामी छौं भनेर उनले सान्त्वना दिएका थिए । – ताजा खबर
Previous नागरिकको जीवनलाई लतार्दै आर्यघाट पुर्‍याउँदै छ सरकार ,अस्पतालमा बेड छन् तर आफ्नो र आफ्नाका लागि”, रवी लामीछाने (भिडियो सहित)
Next यिनै हुन् ओलीसँग नझुकेर टक्कर लिने एमालेकी निडर नेतृ, बालुवाटारमा खैलाबैला